အဆိုပါအမိန့်အပြောင်းအလဲ: အထက်အောက်အလင်းခဲ့ဘဝကတစ်စင်တာနှင့် ပတ်သက်. အမျိုးမျိုးသောပုံစံများသို့သူ့ဟာသူတည်ဆောက်ရာဖြစ်ပါတယ်။
vol ။ 1 သြဂုတ်, 1905 ။ အမှတ် 11
HW PERCIVAL နေဖြင့်မူပိုင်ခွင့်, 1905 ။
အဆိုပါ noumenal ကမ္ဘာ၏ကြီးစွာသောအခြေခံမူနေသောခေါင်းစဉ်: ဝိညာဏ်, ရွေ့လျားမှု, ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အသက်ရှု။ အဆိုပါ noumenal ကမ္ဘာ၏အခြေခံမူပေါ်ထွန်းခြင်းကမ်ဘာပျေါတှငျထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတဲ့မှတဆင့်ကြီးစွာသောအချက်များသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းစဉ်များ, နေသောခေါင်းစဉ်: ဘဝ, ပုံစံ, လိင်နှင့်အလိုဆန္ဒ။ ထင်, တစ်ဦးချင်း, အသက်ဝိညာဉ်များနှင့်အလိုတော်: အထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ကမ်ဘာပျေါတှငျပေါ်ထွန်းခြင်းမှတဆင့်သည်ဤအချက်များသို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်များ၏မှီဖြစ်ကြသည်။ အခြေခံမူ, အချက်များနှင့်မှီ, နောက်ဆုံးမှာသို့ဖြေရှင်းပြီးနှင့်ဝိညာဏ်ဖြစ်လာရသည်။ အဆိုပါ noumenal ကမ္ဘာ၏ဘာသာရပ်များခေတ္တမျှကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ကမ်ဘာပျေါတှငျပထမဆုံးအချက်ငါတို့ရှေ့မှာဖြစ်ပါသည်: အသက်တာ၏ဘာသာရပ်။ အီဖေးဟာ noumenal world.L သိစိတ်ကိုအားလုံးတတ်နိုင်သမျှဆည်း၏စိတ်ကူးသည်အဘယ်အရာကိုသတိဟာအံ့သြဖို့ဖြစ်ပါတယ်; ယင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်အားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုနောက်ဆုံးရရှိပြည်နယ်နှင့်အခြေအနေများမှတစ်ဆင့်ပဲ့ထိန်းနေကြသည်။
ဘဝကဤလုပ်ငန်းစဉ်၏အစဖြစ်၏ ကနဦးဗီဇနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု; အဆိုပါထူးခြားဆန်းကြယ်ဤလောကတှငျပေါ်ထွန်းခြင်းမှတဆင့်တိုးတက်မှု။ ဘဝကဖြစ်လာ၏လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်၏ ကသာနည်းလမ်းမဟုတ်, အဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါထူးခြားဆန်းကြယ်ဤလောကတှငျဘဝအားလုံးမျှမက, ထိုသို့လှုပ်ရှားမှု-centrifugal ရွေ့လျားမှု-ဖြင့်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းပစ္စည်းဥစ္စာထံမှထွက်မှုတ်နေသည်အဖြစ်အံ့သြစကွဝဠာပုံစံများသို့ပြောင်းလဲသော၏တစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါတယ်။
ဘဝမဟာရူတက္ကသိုလ်နှင့်ကမ္ဘာ၎င်း၏ဖတ်ရင်ဘာမှန်းမသိနှင့်မမြင်ရတဲ့နက်နဲသောပင်လယ်စနစ်များထဲကနေတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲစေ, လှုံ့ဆျောပေးထားတဲ့အပေါ်တစ်ဦးအားကြီးသောသမုဒ္ဒရာသည်။ ဤရွေ့ကားမြင်နိုင်ပုံစံသို့မမြင်ရတဲ့အသက်တာ၏ဒီရေအပေါ်ဘွားဘွားမြင်နေကြသည်။ သို့သော်ခဏ, အဒီရေလှည့်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ပြန်မမြင်ရတဲ့သို့ဘွားမြင်သည်။ ဒါကြောင့်မမြင်ရတဲ့အသက်တာ၏ဒီရေအပေါ်ကမ္ဘာထွက်လှိမ့်နှင့်နောက်တဖန်အတွက်ရေးဆွဲ။ အသက်တာ၏သမုဒ္ဒရာအများအပြားရေစီးကြောင်းရှိပါတယ်; ပေါ်မှာရှိသမျှနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးသည်ဤရေစီးကြောင်း၏တဦးတည်းတွင်နေထိုင်သည်။ အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့အသက်တာ၏သိမမြင်ရတဲ့အနေဖြင့်မမြင်ရတဲ့ရန်၎င်း၏ဒီရေရဲ့အပြောင်းအလဲကိုမှာ, မြင်နိုင်သောပုံစံမှတဆင့်သာသည်၎င်း၏ကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘဝကိစ္စဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အရမ်းအသေးစိတ်ကရူပဗေဒပညာရှင်များ၏ကိစ္စနှငျ့တစျတနျးမရနိုငျသိရသောဒြပ်စင်ထက် သာ. ကောင်း၏။ သိပ္ပံခေတ်သစ်လူ့ယဉ်ကျေးမှု၏ဉာဏ Magician ဖြစ်၏ ထိုသို့ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ကမ္ဘာ၏အောက်ပိုင်းအလွှာကျော်လွန်ကြီးထွားမပါဘူးဆိုရင်ပေမယ့်ရုပ်ဝါဒသိပ္ပံ, က၎င်း၏နို့စို့အရွယ်၌သေလိမ့်မယ်။ အဆိုပါရူပဗေဒပညာရှင်များ၏အိပ်မက်ဘဝရလဒ်ထက်အကြောင်းမရှိကြောင်းသက်သေပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝမတည်ရှိခဲ့ပါဘူးဘယ်မှာသူဟာဘဝမှာထုတ်လုပ်မယ်လို့; အချို့သောဥပဒေများဖြင့်၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးအုပ်ချုပ်; ထောက်လှမ်းရေးနှင့်အတူကပဒေသာပင်များလည်း; ထို့နောက်၎င်း၏အစဉ်အဆက် form မှာတည်ရှိတော်မူပြီးမှ၏, မက၎င်း၏ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတော်မူပြီးမှထောက်လှမ်းရေး၏အဘယ်သူမျှမသဲလွန်စထွက်ခွာပါကငျ့သှား။ ကမတည်ရှိခဲ့ပါဘူးရှိရာဘဝထုတ်လုပ်နိုင်ယုံကြည်သောသူတို့အားရှိပါတယ်; ကထောက်လှမ်းရေးဖော်ပြစေခြင်းငှါ, ကြောင်းထောက်လှမ်းရေးအစဉ်အမြဲ dissipated နိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကယုံကြည်ဖို့ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဆိတ်ကွယ်ရာပုံစံကနေသူ့ရဲ့တည်ရှိမှုနှင့် ပတ်သက်. ထင်ကြေးဖို့ငြင်းဆန်စဉ်ယင်းသို့အသက်တာ၏လုပ်ငန်းစဉ်များနားလည်နိုင်မထင်မည်မဟုတ်ပါ။ အသက်တာ၏သရုပ်အချို့သည်တန်ဖိုးထား, ဒါပေမယ့်သူတို့ကအစအဦး၌ရှိအဖြစ် "အစွမ်းမဲ့" ကိစ္စကနေဘဝထုတ်လုပ်နိုင်မှအခိုင်အမာတဲ့သူတွေနေဆဲအဖြစ်ဝေးဖယ်ရှားပြီးပြဿနာရဲ့အဖြေကနေဖြစ်ကြ၏။ အစွမ်းမဲ့ကိစ္စကနေဘဝထုတ်လုပ်ရန်ဘဝကိုမတည်ရှိပါဘူးဘယ်မှာမျှဘဝကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ no "ဆိုတဲ့အစွမ်းမဲ့" ကိစ္စရှိသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်။ အသက်တာ၏ပေါ်ထွန်းခြင်းများ၏ပုံစံများအဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ဘဝမှာပုံစံအားလုံးကိုအတွက်လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝကိစ္စနှင့်အတူပူးတွဲအဖြစ်အပျက်မဟုတ်ကြပါလျှင်, ကိစ္စ form မှာမပြောင်းနိုင်ဘူး။
မိမိအရှာဖွေရေးစတင်များနှင့်ဘဝပုံစံလောကီသားတို့သည်ဖြတ်သန်းနေစဉ်အဆုံးသတ်ကြောင့်ဇီဝဗေဒပညာရှင်အသက်တာ၏ဇာစ်မြစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူကပုံပေါ်မရောက်မီအသက်အဘို့အကြည့်ဖို့ငြင်းဆန်, သို့မဟုတ်ပါက၎င်း၏ပုံစံကိုအရွက်ပြီးသည့်နောက်သူ့ထင်မြင်ချက်၌အတိုင်းလိုက်နာရန်။ ဘဝကပုံစံမှတဆင့်တို့အားထငျရှားစဖြစ်လာသောအရာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အေးဂျင့်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်ပုံစံဖွံ့ဖြိုးထားတဲ့အထဲကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါသည်: ပုံစံများ၏ဖျက်သိမ်းနှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အသက်တာ၏သိတင်းကိုဤအရပ်မှလှုပ်ရှားမှု။ ဘဝကအရာရာ၌တိုးတက်မှုနှင့်ချဲ့ထွင်မှု၏နိယာမဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မွကွေီးပျေါမှာအသက်တာ၏သမုဒ္ဒရာတစ်ဦးကလက်ရှိတစ်ဦးဆွန်းနှင့်အလင်းဆုံရေမြှုပ်နှင့်တူ၏။ ကျနော်တို့ကဒီရေမြှုပ်များ၏အရေပြားတွင်နေထိုင်လျက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့အသက်တာ၏သမုဒ္ဒရာ၏အဝင်ဒီရေပေါ်မှာလှိုင်းများကဒီနယ်ပယ်မှဘွားနှင့်အချိန်ပြီးနောက်, ဆုတ်ယုတ်မှာကျွန်တော်တစ်ဦးလှိုင်းပေါ်စွန့်ခွာသွားလော့, ဒါပေမယ့်အသက်တာ၏သမုဒ္ဒရာနေဆဲခဲ့ကြသည်။ စကြဝဠာနှင့်၎င်း၏ကမ္ဘာအသက်တာ၏က၎င်း၏သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိတစ်ဦးချင်းစီအသက်ရှင်သည်အတိုင်းအသက်တော်ကနေတဆင့်စိတ်ကိုမွေးဖွားမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ဝင်သောအခါ, ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီအသက်တာ၏ကိုယ်ပိုင်တစ်ဦးချင်းစီသမုဒ္ဒရာသို့ဖြတ်သန်းပါတယ်။
တစ်ခန္ဓာကိုယ်အသက်တာ၏အဆောက်အဦ၌စီးကျလာတယ်နှင့်ပြင်ဆင်ဒီဇိုင်းအညီတည်ဆောက်နှင့်အသိ၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတီထွင်နေကြပါတယ်။ ဤခန္ဓာကိုယ် inhabits သူစိတ်ထဲ sensuous အသက်တာ၌ဗတ္တိဇံကိုဖြစ်ပါတယ်။ သဘောခန္ဓာကိုယ်ဖြတ်သန်းအသက်တာ၏စင်ကြယ်သောလက်ရှိအသိ၏အလိုဆန္ဒများအားဖြင့်ရောင်စုံဖြစ်ပါတယ်။ ပထမတော့စိတ်ကိုအသက်တာ၏အာရုံ၏အပျြောအပါးမှတုံ့ပြန်။ အပျြောအပါး၎င်း၏သည်အခြားအဆင့်နာကျင်မှုအသက်တာ၏အာရုံ၏တဦးတည်းအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်အသက်တာ၏အာရုံခံစားမှုတွေ့ကြုံရသောအခါစိတ်ကိုပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်အတူအရမ်းပျော်။ အသိ၏မော, အကိုယ်တွင်းအင်္ဂါမရှိတော့အသက်တာ၏စနစ်တကျလက်ရှိတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့အခါ, နာကျင်မှု၏အတှေ့အကွုံကိုနှစ်သက်ရလဒ်များ၏အာရုံကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု။ ပေါ်ထွန်းခြင်းကမ်ဘာပျေါတှငျအသက်တာ၏တန်ဆာကိုစိတ်ဖြစ်တယ်, အတွေးအသက်တာ၏လက်ရှိပြောင်းလဲစေပါသည်။
ကျနော်တို့ဘဝ၏ဤသမုဒ္ဒရာမှာနေထိုင်ပေမယ့်ကအာရုံလှုံ့ဆော်အဖြစ်သာဘဝကိုသိသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်မှု, အမှန်တကယ်နှေးကွေးသည်။ ယင်းအာရုံအသက်တာ၏သွားတာတို့ကဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်နေစဉ်စိတ်ကိုရ၏ စိတ်ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏သင်တန်းတွင်, အာရုံသူတို့အသက်တာ၏ဒီရေအားဖြင့်ရှုံးသူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ရေး၏ကန့်သတ်မှုကိုရောက်ရှိသည့်အခါ, ဒါပေမယ့်, စိတ်ကိုမဟုတ်လျှင်ဒါကြောင့်အတွင်းအာရုံဆက်ရေးစေခြင်းငှါ၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Moore ကနေသူ့ဟာသူလွှတ်ပေးခြင်း။ ဤရွေ့ကားထို့နောက်အသက်တာ၏မြင့်မားသောရေစီးကြောင်းသို့ယင်း၏ turbid စီးထဲကချီပင့်ကြလိမ့်မည်။ ထိုအခါစိတ်ကိုမေ့လြော့ရာ Cross-ရေစီးကြောင်းများကသုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည်, မမှား၏ကျောက်ဆောင်ပေါ် dashed နှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်, ဒါပေမယ့်သူကသိတော့နှင့်ရရှိထားသူက၎င်း၏လက်ကျန်ငွေနှင့်၎င်း၏ခုတ်မောင်းနိုင်မည့်အသက်တာ၏တောက်ပစီးသို့ယင်း၏အဝတ်တော်၏ပို့ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ပါ အသက်ရှည်သမျှရေစီးကြောင်းနှင့်အဆင့်တဆင့်သင်တန်းလုံခြုံစွာ။
ဘဝ stagnate လို့မရပါဘူး။ အာရုံ၏ဤဘဝအချိန်တိုအတွင်းပေမယ့်ကြာရှည်ခံသည်။ ယင်းအာရုံမှတဆင့်စိတ်ထဲထွက်ရောက်ရှိယခုဘဝ၌ရှိသမျှသောပုံစံများကိုမှတွယ်ကပ်လိုရှိ၏ ဒါပေမယ့်လျှင်အာရုံသူတို့သည်မကြာမငျ့သှားဤလောကကိုအစိုးရသောအသက်တာ၌ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ရင့်ကျက်။ စိတ်ကိုညှိုးကိုင်နှင့်သူတို့ကိုင်နေစဉ်ပင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း lay မယ်လို့ထားတဲ့အပေါ်ပုံစံများ။
စိတ်ကိုကစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သင်ယူနှင့်၎င်း၏နက်နဲသောပင်လယ်သွားလာစေခြင်းငှါဝင်သောသောအသက်တာ၌အတွေ့အကြုံကိုရှာတတ်၏။ စိတ်ကိုနက်နဲရာကိုရှာခြင်းနှင့်အသက်တာ၏အရာဝတ္ထုပြည့်စုံနေပါသည်အားလုံးဆန့်ကျင်ရေစီးကြောင်းဆန့်ကျင်သည်၎င်း၏စစ်မှန်သောသင်တန်းမှကိုင်နိုင်တဲ့အခါ။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုအောင်မြင်သောအဖြစ်စိတ်ဆန့်ကျင်ရေစီးကြောင်း၏အသီးအသီးအားဖြင့်နှိုးဆွခြင်းနှင့် invigorated ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်အစားင်း၏သင်တန်းလွှဲနှင့်သူတို့ကိုအားဖြင့်ကျော်လွှားခံရကောငျးကြိုးအတှကျအသက်ရှည်သမျှရေစီးကြောင်းသုံးစွဲဖို့တတ်နိုင်သည်။
ပစ္စုပ္ပန်မှာကျနော်တို့အကြောင်းကိုသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်သို့မဟုတ်ကိုယ်သိသောအရာကိုအစဉ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သောပုံစံသာအသက်ပေတည်း။ အဘယ်အရာကိုကြှနျုပျတို့သိရန်ကြိုးစားနဲ့အသက်ရှင်မည်အကြောင်း, ထာဝရအသက်ဝိညာဏ်တည်းဟူသော၏ကြီးမြတ်ဆည်းဖြစ်ပါတယ်။